Mpanamboatra fatoriana seza
Fanaka marika, fiantohana kalitao
Fandriana sofa, ambony seza, recliners, sofa fizarana, kidoro sy farafara fandriana miaraka amin'ny Modern, Eoropa, Fomban'ny Chesterfield
Over 35 taona niainana ODM & OEM azo itokisana
Baotian Furniture Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1985 ary miorina ao Shunde, Tanàna Foshan, Faritanin'i Guangdong. Manarona faritra iray an'ny 50,000 metatra toradroa sy ny renivohitra voasoratra anarana momba 2 tapitrisa USD.
Ny mpanamboatra sezalava baotiana dia niavaka tamin'ny famokarana sofa, sofa fandriana, recliner elektrika, kidoro sy farafara fandriana. Miara-miasa amin'ny tetikasan'ny hotely izahay, ambongadiny, sy ny mpivarotra antsinjarany.
Miatrika fanaka maro be sy hita toy izany, be dia be ny hevitra tokony horaisina. Azo antoka, ho an'ny zana-pandriana, ny karazany dia mitovy amin'ny fandriana hatramin'ny halehibe ka hatramin'ny fitaovana. Noho izany, raha mahatsapa fisalasalana ianao na sarotra aminao ny manapa-kevitra hoe iza no tokony ho safidy voalohany amin'ny fomba ahoana, ahoana ny mianatra an'ity takelaka fandriana mpanjaka ity?
Miendrika backrest miaraka amina foam misy habe avo ianao izay mahatsiaro ho malefaka sy manohana anao koa. Ny lamba volory volondavenona mainty dia ho mora diovina. Ny famolavolana armrests milamina dia tokony hifanaraka amin'ny latabatra fisakafoanana hafa. Ny seza hazo mafy orina izay mahatonga ny fiainam-panompoana ho lava kokoa sy hamolavola mifangaro.
Chesterfield sofa miaraka amin'ny chaise no iray maivana sy malefaka kokoa noho ny hafa, izay maka sofa mahazatra Chesterfield mahazatra. Izahay dia mandray ilay volavola taloha, fa manome azy fahatsapana maoderina kokoa. Miorina amin'ny karazana tufting an'i Chesterfield, manandrana manova ny endriny mavesatra nentim-paharazana isika.
Sofa chaise moderina misy loko volomparasy kanto - mistery malaina nefa mahafatifaty. Ny tongotra hazo mafy orina dia manome fanohanana mahery vaika. Ny fahatsapana ahazoana aina dia mivoaka amin'ny fipetrahana sofa toy izany amin'ny alàlan'ny lohataona misy paosy & spaonjy avo lenta.
Miaraka amin'ny fanatsarana ny kidoro, mipoitra hybrid vaovao vao miseho, izay mirona amin'ny safidy ho an'ireo izay manantena ny hanana ho an'ny fahatsiarovana sy ny kidoro anaty. Raha ny tena izy, ny kidoro hybrida dia ivon-toeran-tsakafom-bolo izay feno busa-bolo avo lenta. Safidy tsara ho an'ny olona te hankafy fifangaroan'ny fanohanana amin'ny lohataona ny Hybrid fa manizingizina ny kalitaon'ny foam-pahatsiarovana.
Ny fandriana fitehirizana hoditra mainty dia tsara safidiana ho an'ny efitrano fatoriana kely satria hanitatra azy ara-pahitana foana izany ary hanampy maivana. Io mainty io dia manambatra glamor miaraka amina style sy headboard quilting matanjaka ary koa manontolo izay manafina boaty fitehirizana.
Chesterfield Design Black Fabric Corner Couch, Modern, Clean, ary ny lamaody. Saron-tsolika iray amin'ny seza paosin-doha am-paosy no tena ahazoana aina sy malefaka. Mora ny manadio sy milamina ny famolavolana mihetsika. Ny bokotra vy volamena sy ny tongony vy tsy manara-penitra dia mahatonga ny endrika sofa ho kanto kokoa.
Fanaka Hotely maoderina fomba maoderina mampiasa fipetrahana seza azo ahodina amin'ny seza sofa 500 Marika amerikana. Ny mekanisma andiana fantsom-pandrosoana toradroa dia manome fanohanana matanjaka kokoa hanomezana izay ilain'ny hotely sy fianakaviana isan-karazany. Ny haben'ny kidoro amin'ny lohataona mahazatra: 90/130*185*12cm.
Ny sofa zoro ankehitriny dia malaza kokoa noho ny habeny azo ovaina sy ny zoro mahafinaritra apetrany. Raha mitady zavatra mahavoa ny fifandanjana mety ianao eo amin'ny chaise sy ny sofa zoro, Diniho ny fanaka Baodianina anay. Ity seza malalaka ity dia manana toerana malalaka ho an'ny fianakaviana rehetra nefa tsy dia masiaka loatra. Ny lamba fisaka vita amin'ny lamba volondavenona dia manampy fatratra amin'ny famolavolana. Betsaka ny hafa azo omena toy ny volory raha tsy tianao ny lamba, koa manana fivarotana manodidina ...
Raha resaka sofas no resahina, safidy tsy manam-petra no hiteraka ao an-tsainao mifototra amin'ny habeny, fomba, ara-nofo, asa tanana, sy ny hafa. Betsaka ny fomba tsy azonao an-tsaina ny fiatrehana karazany maro. Na izany aza, Ireo zavatra telo fototra izay manapa-kevitra amin'ny fomba sofa. Anisan'izany ny sandry, indray, sy ny tongotry ny sofa, na inona na inona sofa sofa zoro manga. Ankoatra ny lamosina, fitaovam-piadiana, zipo, seza, sns, misy famaritana bebe kokoa omena ny fahitana momba ny velvetana velvetana navy .....